Khanyisa Umlilo Kagesi kule Ambient Lit Modern Pad - I-Airbnb
Khanyisa Umlilo Kagesi kule Ambient Lit Modern Pad
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Harlene And Sean
Setha ukuma kwenhliziyo bese uhlala kusofa ekhoneni elinethezekile ukuze uthole ubusuku be-movie phambi kwe-Sony smart TV engu-50-intshi. Le suite yesimanje ekhanyayo, esanda kulungiswa, isezingeni eliphansi lekhaya lethu, inomnyango wayo wangasese. I-suite inebha yasekuseni ecwebile, emhlophe qhwa, Ikhishi le-Galley kanye nezindonga ze-chic charcoal grey! Indawo yomlilo kagesi enhle, kanye nesibani esiholayo kuyo yonke le nto yenza lokhu kube okohlobo oluthile. Ukukhanyisa kulungiseka ngokuphelele umbala nokukhanya futhi i-TV ilungele ukubuka i-Netflix, ukuphequlula i-YouTube, noma iwebhu nokunye.
Setha ukuma kwenhliziyo bese uhlala kusofa ekhoneni elinethezekile ukuze uthole ubusuku be-movie phambi kwe-Sony smart TV engu-50-intshi. Le suite yesimanje ekhanyayo, esanda kulungiswa, isezingeni eliphansi lekhaya lethu, inomnyango wayo wangasese. I-suite inebha yasekuseni ecwebile, emhlophe qhwa, Ikhishi le-Galley kanye nezindonga ze-chic charcoal grey! Indawo yomlilo kagesi enhle, kanye nesibani esiholayo kuyo yo…
“Ukukhanyisa kwe-LED okuzungezile kuyamangalisa ukusetha isimo sengqondo, kungasethwa kunoma yimuphi umbala. Kupholile kakhulu!”
– Harlene And Sean, umbungazi wakho
4.81 out of 5 stars from 391 reviews
4.81 (izibuyekezo ezingu-391)
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-391
Lena indawo ethule, yokuhlala e-Vancouver. Izinkantolo zethenisi zaseMoberly Park ziwuhambo lwemizuzu emi-2. Kukhona indawo yokudlela e-Whitespot engahamba imizuzu emi-5 kanti i-Langara Golf Course kanye neFraserview Golf Course kuphakathi nohambo lwemizuzu emi-5.
Cishe imizuzu eyi-15-20 ukuya edolobheni laseVancouver.
Imizuzu eyi-10 ukuya e-Richmond City Center.(i-Richmond inezindawo zokudlela nezitolo eziningi zase-Asia) I-Marine Gateway iqhele ngamaminithi angu-5 ngemoto inezitolo, Amathiyetha e-VIP, Izindawo zokudlela, kanye ne-Skytrain Station.
Ibanga ukusuka e- Vancouver International Airport
Ibungazwe ngu-Harlene And Sean
UHarlene And Sean Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 22-156355